Ardayda jaamacadaha ku biiraya oo ugu dambeyn maanta beddelaad sameyn karo | Star FM
Home Wararka Kenya Ardayda jaamacadaha ku biiraya oo ugu dambeyn maanta beddelaad sameyn karo
Ardayda jaamacadaha ku biiraya oo ugu dambeyn maanta beddelaad sameyn karo
Waaxda qaabilsan in ardayda dhameeyay dugsiyada sare ee dalka ay si siman ugu biiraan machadyada iyo jaamacadaha ee KUCCPS ayaa bayaan soo saartay.
Waxay waaxdu sheegtay in ardaygii horay u codsaday koos ama culuunta uu doonayo inuu barto uu haysto ugu dambeyn maanta si uu mid kale u xusho.
Mudada kama dambeyska ah ee ardaydan loo qabtay ayaa ah 3-da galabnimo ee maanta.
Labo toddobaad ka hor ayay ahady markii waaxda (KUCCPS) ay fursad siisay in ka badan 43,425 oo ah arday helay buundada C+ si ay u xushaan koosaska ay doonayaan in ay bartaan.
Previous articleBooliska oo raadinaya nin dhawaan toogasho gaystay
Next articleDHAGEYSO:Carruur ku dhimatay dab ka kacay guri ku yaalla Hargeysa